Otu esi esonye ndepụta Robinson iji kwụsị ịnata mgbasa ozi site na ekwentị, ozi, wdg | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi esonye na ndepụta Robinson iji kwụsị ịnata mgbasa ozi site na ekwentị, ozi, wdg.
Ọtụtụ mmadụ na-ada mba ịnata mgbasa ozi n'ụdị oku, ozi ịntanetị na ozi niile ka anyị nwee ike isonye na ọrụ ha. Typedị ụdị mgbasa ozi a adịla ọtụtụ afọ na nke mbụ, otu ihe ga-edo anya: Onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ gị na-akpọtụrụ gị na-arụ ọrụ ha, yabụ ọ bụ nzuzu ka iwe wee ha maka ịnata ụdị oku a..
Ọ bụ ihe kwere nghọta na mgbe ụfọdụ na kpọmkwem n'ihi nkwụsi ike nke oku ndị a, ị nwere ike iwe iwe na ọbụnadị iwe, mana ịkwụ ụgwọ ya na onye nọ n'akụkụ nke ọzọ nke ekwentị agaghị enyere gị aka, dị nnọọ iche, ebe ha nwere ike ịkpọ gị ọzọ n'ime awa ole na ole ...
1 Gịnị bụ Ndepụta Robinson?
2 Iwu Organic 3/2018, nke Disemba 5, Nchedo nke Personal Data na nkwa nke ikike dijitalụ
3 Ọ bụrụ na mgbasa ozi ahụ bụ maka ọrụ nkwekọrịta, kpọtụrụ ha
4 Isi ihe ị ga-ebu n'uche iji zere spam
5 Iningbanye na ndepụta Robinson bụ n'efu ma dịkwa mfe
6 Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ ọnwa atọ, nke a na ndepụta ma ha na - akpọ m?
Gịnị bụ Ndepụta Robinson?
Ọ bụ ya mere enwere ndepụta dị ka Ndepụta Robinson na anyị ga-agwa gị gbasara taa. Na ya, ihe ezubere bụ ka enwee ihe niile apụtachasịrị ike yana dịka ụlọ ọrụ niile, ụlọ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ, ha ga-agarịrị Ndepụta Robinson mgbe ha ga-eziga mgbasa ozi ma ha enweghị nkwenye doro anya nke ndị nnata.
N'okwu a ọrụ bụ n'efu maka ndị ahịa niile na ebum n’uche ya bụ mbenata mgbasa ozi ha na-anata. N'ụzọ ezi uche dị na ya na aka nke ọzọ, anyị ga-eburu n'uche na anyị na-enye ụlọ ọrụ data anyị niile, yabụ nke a ga-edo anya site na mbido.
Ebe i nwere ike banye maka free ka Ndepụta Robinson ịkwụsị inweta ụdị mgbasa ozi a, n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Ọrụ Ndepụta Robinson bụ akụkụ nke ubi nke mgbasa ozi ahaziri, ya bụ, mgbasa ozi onye ọrụ natara na-ezere ụfọdụ mkpọsa mgbasa ozi, ma ojiji nke ozi, oku ma ọ bụ ozi.
Iwu Organic 3/2018, nke Disemba 5, Nchedo nke Personal Data na nkwa nke ikike dijitalụ
Anyị niile nwere ikike na mgbe anyị na-ekwu maka mgbasa ozi na-arụ ọrụ, dị ka ọ dị, anyị kwesịrị iburu n'uche na Iwu Organic 3/2018, nke Disemba 5, na Nchedo nke Data Nkeonwe na nkwa nke ikike dijitalụ, e kere kpomkwem zere nke a ụdị mgbasa ozi na ndị ọrụ na-anaghị akwado ya. Ọ bụ ihe dịka ihe anyị na-ahụ na igbe igbe ma ọ bụ obodo ụfọdụ na-akọwapụta: "Anabataghị mgbasa ozi." Ọ bụrụ na a ga-etinye ụdị mgbasa ozi azụmahịa n'ụdị ọ bụla na igbe akwụkwọ ozi ndị a, ndị ọrụ nwere ike katọọ ụlọ ọrụ na-agbasa ozi mgbasa ozi a.
Mana ka ọrụ akụ na ụba wee nwee ihe ịga nke ọma, mgbasa ozi dị oke mkpa, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na nhazi nke data nkeonwe dị mkpa, onye ọrụ ahụ n'onwe ya nwere ike ịbelata ya. Ọ kachasị, nhazi data maka ebumnuche mgbasa ozi ka amatara na Iwu (EU) 2016/679. Nkwalite nke mmega ahụ ziri ezi nke ihe ndị a na-ekwu ga-abụrịrịrịrịrịrịrịrị na udo site na ikike maka nchekwa nke data nkeonwe na nzuzo, yabụ ịchọta nguzozi n'etiti isi ihe ndị a bụ ihe ụlọ ọrụ ga-enweta.
Ọ bụrụ na mgbasa ozi ahụ bụ maka ọrụ nkwekọrịta, kpọtụrụ ha
Anyị kwesịrị ịma otu esi amata ọdịiche dị n'etiti ụdị mgbasa ozi dị adị na nke ezi uche dị na ya mgbe onye ọrụ nwere ọrụ enyere ya na onye ọrụ ya, dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ikike izipu mgbasa ozi n'ihi na n'ezie na ụfọdụ isi ihe ndị anyị binyere na nkwekọrịta ahụ ọ na-ekwu ya. Ee, ọ ga - ekwe omume na ọ nweghị onye ga - agụ nkwekọrịta ahụ mana mgbe ọ bịanyere aka na ya ụlọ ọrụ na-eji ikike a ma zitere anyị mgbasa ozi nke ọrụ gị mgbe na otu ịchọrọ.
N'ebe a, ọ dịghị mkpa ma ọ bụ bụrụ ihe amamihe iji "ndị ọrụ mpụga" iji gbochie mbata nke mgbasa ozi, n'ọnọdụ ndị a Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịkpọtụrụ helpdesk ozugbo ma rịọ ka a ghara iziga mgbasa ozi ọzọ. Anyị nwedịrị ike ịga ụfọdụ ụlọ ahịa anụ ahụ ebe ha ga-enye anyị ndụmọdụ na usoro iji gbochie mgbasa ozi iru nọmba ekwentị nke ọrụ ha. Ndị a ga-asọpụrụ mkpebi onye ọrụ mere mgbe niile, site na iwu.
Isi ihe ị ga-ebu n'uche iji zere spam
Ma ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ iji kpochapụ ụdị oku a yana ụfọdụ ndị ọkachamara n'okwu ndị a na-ekwu: site na agụmakwụkwọ ị nwere ike ịnweta ihe niile. Ọtụtụ ndị enyi na ndị ezi na ụlọ “na - ewute” ndị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ N'ihi oku, ha na-emecha na-arụ ọrụ ha na nke a nwere ike ịla azụ na n'ọtụtụ ọnọdụ na-eme ka oku mụbaa. Asịla "Enweghị m ike ugbu a, kpọọ ma emechaa" n'ihi na ha ga-ekwusi ike na ọgbụgbọ.
Onwe m na - ekwu okwu na oku m na - anata (anaghị m asị sms ma ọ bụ ozi ịntanetị ndị dị iche) ihe m na - eme bụ ịnwaleNwee nsọpụrụ dị ka o kwere mee na onye ọrụ / ma ọ bụ ka ọ kwuo na achọghị m ịnata mgbasa ozi ọzọ. Nke a na-arụrụ m ọrụ ọtụtụ oge, mana m ghọtara na ndị ọzọ anaghị eme ya, yabụ azịza ya nwere ike ịbụ ndepụta Robinson a.
Iningbanye na ndepụta Robinson bụ n'efu ma dịkwa mfe
Ee, akụ nke Ndepụta Robinson ọ bụ ihe na-akpali mmasị igbutu "mmekpa ahụ maka azụmahịa" nke ụfọdụ ndị doro. Nke a bụ ndekọ nke ndị ọrụ na-achọghị ịnata mgbasa ozi na ọ bụ n'efu, mana ọ ga-edo anya na ndepụta a na-echebe anyị n'aka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị anyị na-enweghị mmekọrịta azụmahịa nke ụdị ọ bụla, dịka anyị kwurula na mbụ na ga-amalite ịrụ ọrụ Ọnwa 3 site na mgbe anyi debanyere aha.
Iningbanye na ndepụta a na-ewe nkeji 5. Ihe mbụ bụ nweta weebụsaịtị ma denye aha na-agbakwunye data niile a rịọrọ, mgbe ahụ anyị ga-enweta nkwenye email maka aha njirimara na paswọọdụ. Mgbe nke a gasịrị, anyị ga-pịa «Tonweta na ọrụ» ha ga-ajụ anyị n'ụzọ ị chọrọ ịkwụsị ịnweta mgbasa ozi, ma ọ bụrụ e-mail, ekwentị (ekwentị na ekwentị), ozi nzi ozi na ozi SMS / MMS.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ karịa otu n’ime mkpọchi ndị a, ị ga - enyerịrị mmadụ iche ịchọpụta nke ọ bụla n’ime ha site na email. Ọ dị mfe na ngwa ngwa iji jikwaa, mana buru n'uche igbu oge na-enwe mmetụta mgbochi ahụ nwee ndidi.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ ọnwa atọ, nke a na ndepụta ma ha na - akpọ m?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike na ịkpọ oku mgbasa ozi, ozi ịntanetị, ozi, wdg, mgbe ọnwa atọ gasịrị ka ọ na-ewe ihe ma ọ bụ obere iji jikwaa usoro Ndepụta Robinson, anyị nwere nhọrọ ọzọ nke ga-esikwu ike ma sie ike, mkpesa na Protectionlọ Ọrụ Nchedo Data.
Okwu ndị a niile dị oke njọ na mgbe ụlọ ọrụ nke gị na ha na-enwebeghị mmekọrịta ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke ị nwere ma ọ bụ nwee nkwekọrịta na-aga n'ihu na-eleghara arịrịọ gị anya ka ị kwụsị ịnata mgbasa ozi ma gaa n'ihu "na - akpagbu" gị mgbe ọnwa atọ gachara na Ndepụta Robinson, ị ga-akọrịrị. Echegbula na n'ọtụtụ oge, ha na-akwụsị iziga mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke gị Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Protectionlọ Ọrụ Nchedo Data ga-ahụ na nke a mechara asat. Nwere ike ịbụ nwatakiri ihe "mberede" mana maka nka ka o di.
Iwu ego sitere na Agencylọ Ọrụ Nchedo Data anaghị enwe mmasị na ụlọ ọrụ ma ọlị, ya mere ejiri m n'aka na ozugbo ị tinyere akwụkwọ mkpesa gị, ụlọ ọrụ ahụ dị na ya ga-akwụsị inye gị nsogbu. Ọrụ a bụkwa n'efu ọ dịkwa ndị ọrụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Otu esi esonye na ndepụta Robinson iji kwụsị ịnata mgbasa ozi site na ekwentị, ozi, wdg.
O2 na-enye ndị ahịa ya niile 30GB data ruru ka Coronavirus
Ngwa miDGT dịzi ugbu a